TAARIIKH NOLOLEEDKII DR. CUMAR CILMI DIXOOD (1947-DII ILAA 2016-KA) QALLINKII KHADAR GOOD |
TAARIIKH NOLOLEEDKII DR. CUMAR CILMI DIXOOD (1947-DII ILAA 2016-KA) QALLINKII KHADAR GOOD
Taariikh Nololeodkii Dr Omar Elmi Duhod Dr Omar Cilmi Doxood.(Khadar Good).
waxaa igu horeysay ee aan arkey bishii April 5, 1990=kii. Waxaan ku kulaney beertii ku taaley bariga magaaladda Balidgubadleh ee raaride ahayd ee ku-taaley barkaadii ina Carwo alle how naxariiste . Ee fadhiisinka u ahayd taliskee guud ee ururkii SNM. Xaruntaas oo u ka socday shirweynihi 6 aad ee SNM.
Laguna doortey guddoomiyihi 5aad ee ururka SNM yeelato waa Cabdirahman Ahmed Cali ( Cabdirahman Tuur) alle how naxariistee, waxaanna wakhtigaas xilka wareejinnaayay Madaxweynaha Somaliland Ahmed Maxamed Mohamud Siiraanyo. Ilaa maalintaa Dr Cumar waanu wada kulmi jirney marka uu dalka yimaado. Muddo dheerna waannu soo wada sheqeyney.
Dr Cumar Elmi Duxood wuxuu ku dhashay magaaladan Hargeysa 1947. Hooyaddii waaxay ahayd Jinaw Faarax Guleed. Wuxuu iskuulka ka bilaabey duugsigii hoose Ee General Daauud 1955 ilaa 1960-kii wuxuu galay dugsigii dhexe ee Ahmed Gurey. Wuxuu dugsigaa dhameystey 1966. Isla sanadka 1966-kii Dr Cumar iyo arday uu ku jiro waxay dawladii rayidke ahayd ee madaxweynaha ka ahaa alla how naxariistee Aden Abdule Osman u dirtey wax barasho dibadeed. Dr Cumar waxa uu tagey wadankii la odhan jirey Midawga Soofiyeeti.
Wuxuu galay kuliyadda caafimaadka ee magaalada Leenin garaad ee imikana layidhaa Sunbeach. Kuliyadda wuxuu ku soo bartey xannuunadda guud. 1971 Dr Cumar wuxuu kusoo noqday Somalia siiba magaaladda Xamar. Darajaddii ugu horeysay markii uu Somalia ku soo noqday waxay ahayd laba xidigle ka tirsan hoganka caafimadka ee wasaaradda gaashaan dhiga. Shaqadii uga horeysay wuxuu ka bilaabey cusba taalka Digfeer ee magaaladda Muqdisho. Isla 1972 waxaa loobedelay cusbataalka Banaadir. 1973 Dr Cumar waxaa uu waxbarasho ugu noqday kuliyadii caafimadka ee Leenin Garaad. Wuxuu ku soo takhasusey xannuunadda maskaxda ku dhaca. Horaantii 1974 ayuu ku soo noqday Somalia oo uu marka qaatay darajadda Gaashaanle. Waaxa loo dhiibey hoganka guud ee cafimadka ee qaybta 21aad ee ciidankii Somalia.
Xaruntiisuna ahayd magaaladda dhuuso Mareeb. Qaybta 21aad wuxuu joogay ilaa iyo 1976.
La soca qaybta 2aad